uncedo - ALinks
Iindawo zokuhlala zokutya eBihar, apho unokufumana khona ukwabiwa kokutya kwisithili ngasinye
January 17, 2022 UMaitri Jha uncedo, Bihar
Ndabelana ngolwazi malunga nokwabiwa kokutya okwenzeka eBihar. Kwakhona, ndinike uluhlu lwesithili sobulumko boluntu ukutya kweendawo zokuhlala. Abantu abaninzi, amaqela, kunye nabantu ngabanye benze umsebenzi wobuqhawe ngokunika umntu osweleyo izidlo. Siyavuya
Ukwabiwa kokutya eDelhi: kukufumana phi ukutya kwasimahla eDelhi?
Novemba 13, 2020 UMaitri Jha uncedo, Indiya
Kule nqaku, ndiza kubonisa uluhlu lwamaziko oncedo eDelhi kunye nezinye iindlela ezinokubakho zokufumana ukutya simahla xa ulambile. Urhulumente wesizwe nowengingqi, esebenzisana namaziko enkolo, imibutho ezimeleyo kunye nabantu,
Ungazifumana phi ii-Night Shelters kufutshane nawe? Jonga Apha!
Juni 3, 2020 UKaruna Chandna uncedo, Indiya
Iindawo zokufihla intloko kufutshane nam Ukufumana indawo yokuhlala kufutshane nendawo okuyo, kufuneka uvule iimephu zikaGoogle kwifowuni yakho. Unokwenza uphando kwifowuni yakho. Kuya kufuneka ungene "kumakhaya okhuseleko kufutshane nam". Yenza
Iindawo zokugcina ukutya kufutshane nam? Ungazifumana njani iichelters zokutya kufutshane nalapho ukhona?
Ngamana 27, 2020 UAntika Kumari uncedo, Indiya
Ukufumana iindawo zokutya kufutshane nam, kuya kufuneka uchwetheze nje 'indawo zokutya ngaphakathi okanye 'Iindawo zokulala ebusuku kwimephu kaGoogle. Kule mephu, unokwazi ukubona ukuba leliphi iziko 'eliqinisekisiweyo
Inkanyamba Amphan indawo yokuhlala
Ngamana 24, 2020 UAntika Kumari uncedo, Indiya
Ukutya nendawo yokuhlala, chwetheza iimephu zikaGoogle, "iindawo zokuhlala ukutya kufutshane nam" okanye "iindawo zokuhlala ebusuku kufutshane nam" okanye "iindawo zokuhlala ukutya eOdisha" okanye "iindawo zokutya eziseNtshona Bengal" .Ungaya nakwiMephu yeIndiya kwaye ukhethe " Iindawo zokunceda indlala
Ndingakufumana phi ukutya? Ukuhanjiswa kokutya eIndiya
Ngamana 18, 2020 UMaitri Jha uncedo, Indiya
Ukusukela nge-Matshi 2020, ukuhanjiswa kokutya okuqhubekayo kuqhubeka eIndiya kuye nakubani na ofuna. Siza kubeka apha ngezantsi ulwazi oluninzi esinokulufumana kwezi ntsuku. Ukuze ufumane indawo yokuhlala kufutshane nendawo okuyo, wena nje
Iinkampu zokuHanjiswa kokutya eJaipur
Aprili 14, 2020 UMaitri Jha uncedo, Indiya
Uya kufumana ulwazi kweli nqaku malunga neenkampu zokuhambisa ukutya eziqhubekayo eJaipur. Inani elipheleleyo lamatyala aqinisekileyo eIndiya ali-10,363. Inani lokufa kule ntsholongwane liyi-339. Izolo eli nani belimalunga
Iinkampu zokuHanjiswa kokutya ePunjab
Aprili 8, 2020 UMaitri Jha uncedo, Indiya
Kule nqaku, uya kufumana ulwazi malunga neenkampu zokuhambisa ukutya ePunjab. Inani labantu abachaphazeleka yi-coronavirus lifumana ukwanda okubonakalayo. Namhlanje (nge-08, ngo-Epreli 2020), inani lama-485 letyala elichazayo longeza
Iikampu Zokunceda Indlala E-Uttar Pradesh
Aprili 7, 2020 UMaitri Jha uncedo, Indiya
Uya kufumana ulwazi malunga neenkampu eziqhubekayo zokunceda indlala e-Uttar Pradesh kweli nqaku. Nge-7th ka-Epreli 2020, inani elipheleleyo lamatyala asebenzayo eIndiya angama-4,911. Inani elipheleleyo lokufa lenyuke laya kwi-137. Kukho i
Ukukhuselwa kwabantwana naBantwana eOstreliya
January 17, 2020 UAntika Kumari uncedo, Ostreliya
Ukukhuselwa kwabantwana eOstreliya Amagunya okhuseleko lwabantwana anokungenelela kuseto lweentsapho ngenxa yomngcipheko omkhulu wokonzakala emntwaneni. E-Australia, urhulumente noorhulumente bommandla banoxanduva ekusebenzeni kweenkonzo zokhuselo lwabantwana. Umthetho wokhuselo lwabantwana kwi